XARUNTA IRSHAAD OO QABATAY WORKSHOP KU SAABSAN KAALINTA ODAYAASHA DHAQANKA EE NABADDA & AMNIGA – مركز الإرشاد للحوار الفكري
Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed ayaa manta 21. 11. 2018 ka qeyb galay kulan ay soo agaasintay XARUNTA IRSHAAD oo looga hadlayay Kaalinta Odayaasha Dhaqanka ee Nabadda iyo Amniga, kaasoo ka dhacay Hotel Makka Almukarrama ee magaalada Muqdisho.
Kulanka waxaa daah furay Agaasimaha Xarunta Irshaad Mudane, Maxamed Bukhaari oo Odayaasha soo dhaweeyay, Islamarkaana uga mahad celiyay sida ay uga qayb galayaan Workshop-kaasi.
Agaasimaha XARUNTA IRSHAAD ayaa soo bandhigay qoraal ka hadlaya sagaal arrimood oo ay tahay in Cilmi baarayaasha iyo Odayaasha Dhaqanka ay ka doodaan, si looga soo saaro daraasad, kadibna looga dhigo barnaamij shaqo oo fasiraad ka bixin kara dhaqanka iyo kaalinta kaga aadan xal u helidda colaadaha iyo sidoo kale doorka ka qaadan karaan nabadeynta iyo dib u heshiisiinta bulshada.
Aqoonyahan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo horey usoo noqday Xildhibaan Qaran haatana ah Lataliyaha Wasaaradda Caafimaadka Dowlada Federaalka ah ee Somaaliya oo ka hadlay kulanka ayaa Odayaasha Dhaqanka ku booriyay in ay horseed u noqdaan xoojinta Nabadgalyada iyo wada noolaashashaha bulshada Soomaaliyeed si guulo la taaban karo looga soo hooyo dib u dhiska Nabadda iyo Dowladnimada, xal waarana looga gaaro Xag-jirnimada iyo Colaadaha ka aloosan qeybo kamid ah Soomaaliya.
Salaadiin, Cuqaal, Ugaasyo iyo Nabadoonnada ka hadlay kulanka ayaa dhamaantood bogaadiyay Doorka ay XARUNTA IRSHAAD ka qaadato wacyi gelinta Bulshada, iyagoo ku baaqay in la xoojiyo kaalintaasi hormuudka ah.
Odayaasha waxay sharaxaad dheer iyo dood geliyeen qodobada ay Xarunta Irshaad ku soo bandhigtay kulanka, iyagoo si weyn u falanqeeyay doorka taariikhiga ah ee Odayaasha Dhaqanka iyo baahida loo qabo in la xoojiyo kaalinta Odayaasha kaga aadan Nabadeynta, xal u helidda colaadaha, yareeynta Xagjirnimada iyo xoojinta Nabadda $ dawladnimada4″
السابق: ملامح الوسطية التي ندعو إليها